News Collection: ‘I am notacall girl but …’ Smita Thapa
‘I am notacall girl but …’ Smita Thapa
दुनियाँ अजीव छ । एउटा व्यक्तिलाई जुन कुरा मन पर्दैन, अर्को व्यक्तिलाई त्यही कुरा राम्रो लाग्छ । कतिपय व्यक्ति परम्परा जोगाउन मरिमेट्छन्, कोही परम्परा तोड्नुलाई नै आफ्नो जीवनको उद्देश्य मान्छन् । केही वर्षअघिसम्म ब्राह्मणले सुँगुर छुँदा उसलाई परिवारबाट निकालिन्थ्यो वा चोख्याएर मात्र गृह प्रवेश गराइन्थ्यो । त्यसबेला केही पढेलेखेका ब्राह्मणले सुँगुरको मासु खाएर त्यसको विरोध गरेका थिए । यस्ता धेरै परम्परा तोडिँदै आएका कारण समाज आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । अहिले समाजमा नतोडिएको कुनै नियम छैन । यही नियम तोडिँदै जाँदा ‘एक नारी ब्रह्मचारी’ अहिले ‘अनेक नारी सर्वहारी’ भएको छ । यो नियम पुरुषमा मात्र लागू हुन्छ, महिलामा हुँदैन भन्ने मान्यता पनि अहिले तोडिन थालेको छ । अहिले पुरुषलाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्ने महिलाको संख्या उल्लेख्य देखिन थालेको छ ।
खोजी गर्दै जाँदा त्यस्ता सयौं युवती भेटिन्छन्, जो पुरुषलाई केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र मान्छन् । तिनै युवतीमध्ये एक हुन्— मोडल स्मिता थापा ।
किनभने तपाईंहरू जस्ता युवतीलाई उनीहरूले खर्च गरेका हुन्छन्, स्वार्थकै लागि संगत गरेका हुन्छन्, होइन र ?
अहिले आएर लाग्छ । किनभने उसले मेरो चाहना पूरा गर्दैनथ्यो । यद्यपि उसलाई सन्तुष्टि दिने क्रममा मलाई जुन आनन्द आउँथ्यो, त्यसबाट म सन्तुष्ट थिएँ ।
किनभने उनीहरू अनुभवी हुन्छन् ।
एकपल्ट ४० वर्षको पाको मानिस मलाई यति मनपर्‍यो कि उसलाई फकाउने क्रममा उसको कारमै हाम्रो सम्बन्ध भएको थियो । त्यसबेला उसले मेरा बारेमा के सोच्यो होला भन्ने पीर लागिरह्यो । मलाई लाग्यो मेरो शरीर आवश्यकताभन्दा बढी भोको छ । यो राम्रो कुरा होइन भन्ने लागेको थियो ।
भएन, ऊ मबाट यति प्रभावित भयो कि मेरा लागि सबैथोक छाड्छु भन्न थाल्यो । उसको परिवार बिग्रने डर भएपछि म साइड लागें । किनभने उसका श्रीमती, छोरा-छोरी थिए । मेरो उद्देश्य ऊसँग सम्बन्ध राख्ने मात्र थियो, परिवार बिगार्ने थिएन ।
सन्तानका लागि विवाह किन गर्नुपर्‍यो र ? मलाई एउटा यस्तो लोग्नेमानिस चाहिएको छ, जो हेन्डसम होस्, असल व्यवहारको होस् । उसलाई म आफ्नो सन्तानको बुवा बनाउन चाहन्छु, तर त्यसमा उसको अधिकार हुनेछैन । त्यो मेरो मात्र सन्तान हुनेछ । source – saptahik)